Rudyard Kipling. Makore gumi nemashanu ekuberekwa kwake. Nhetembo mbiri | Zvazvino Zvinyorwa
Ended 1865 paakauya panyika Joseph Rudyard kipling en Mumbai (India), mumwe wevanyori vanoita nhoroondo muzvinyorwa nemavara makuru. Ini handina kutaura zvandakaita mukati ichi chinyorwa yemafirimu akashandurwa ebhuku rake rinozivikanwa kwazvo, Bhuku resango. Nhasi, kupemberera nyowani gore rekuzvarwa kwake (atove makore gumi nematatu), Ndinorangarira murutivi rwake rwenhetembo aine nhetembo dzake mbiri: inozivikanwa Si y Usaramwe, kuwedzera kune mamwe mavhesi kubva kwaari Epitaphs dzehondo. Zvanga zviri Nobel Prize yeMabhuku muna 1907.
Kipling, anonyanya kuzivikanwa pamwe nebasa rake rakakosha rezvinyorwa, akange achitarisirwawo senhetembo yenyika yeGreat Britain. Akanyora mabhuku matatu enhetembo: Makungwa manomwe, Bharadhi dzemauto y Marudzi mashanu. Nhetembo yake yepasirese, Si, yakabatanidzwa mukuunganidzwa kwenhetembo Fairies uye mabhenji, kubva muna 1911. Ini ndinowedzerawo mamwe mavhesi akaiswa mune yake Epitaphs dzehondo, yakafuridzirwa neHondo Yenyika Yekutanga kwakafira mwanakomana wake John.
3 Epitaphs dzehondo
kurasikirwa neyako uye nekuti ivo vanokupomera,
kana uchikwanisa kuzvivimba kana munhu wese akakukahadzika,
kana iwe uchikwanisa kumirira usina kuneta mukumirira,
kana kunyeperwa, usabhadhara nenhema,
kana kuvengwa, usape ruvengo,
uye -kwete- hazvitarike kunge zvakanyanyisa kunaka, kana kuchenjera.
Kana iwe uchigona kurota - uye usaite zviroto mudzidzisi wako,
kana iwe uchigona kufunga - uye usaite mazano chinangwa chako,
kana uchigona kusangana Nekukunda uye Njodzi
bata vabati vaviri nenzira imwechete;
kana uchigona kubvuma chokwadi chawataura
kupusiswa nemakoronyera anobiridzira mapenzi.
Kana tarisa zvinhu izvo iwe zvawakaisa muhupenyu hwako, zvakaputsika,
uye buruka uye uvakezve nematurusi ekare.
Kana iwe uchikwanisa kukona kukunda kwako kwese
uye uvaise panjodzi yekurohwa nemhanza,
uye usambotaura chero chinhu pamusoro pezvawakarasa;
kutamba nguva yako mushure mekunge dzashandiswa.
Saka saka ramba kana usina kana chinhu chasara
kunze kweiyo Kuda inokuudza kuti: "Ramba."
Kana iwe uchikwanisa kutaura kumapoka uye chengetedza kunaka kwako,
kana kufamba nemadzimambo uye usarase njere,
kana vavengi neshamwari vasingakwanise kukukuvadza,
kana uchigona kuzadza iyo isingakanganwike miniti
nemasekondi makumi matanhatu anoipfuura.
Nyika ndeyenyu nezvose zvinogara mairi,
uye-chii chimwe-, iwe uchave uri murume, mwanakomana.
Kana zvinhu zvikatadza kufamba sezvavanoita dzimwe nguva,
kana ini ndikapa nzira yako chete zvikomo kukwira,
kana uine zvishoma kuti uve nezvakawanda asi kubhadhara,
uye iwe unofanirwa kunyemwerera kunyange kutochema,
kana kurwadziwa kuchikukurira uye usisagone kutambura,
Zorora pamwe unofanira asi haumboregi.
Kuseri kwemumvuri wekusahadzika
yatove sirivheri nerima,
kukunda kunogona kubuda,
kwete kukundikana kwawaitya,
uye hazviite kuti kusaziva kwako kufungidzire kuti padhuze sei,
zvingave zvakanaka izvo zvaunoshuvira uye kuti iwe utonge kure kure, kurwa,
Zvakanaka, zvisinei kuti unotambura zvakadii muhondo.
Kana zvese zvanyanya, vazhinji vanofanirwa kuomerera!
Kana magumo akakudonhedza pasi muhondo,
kana zvese zviri munzira yako zvichikwira,
kana kunyemwerera kwako kugutsikana kusuwa,
kana paine basa rakawandisa uye kukohwa kwakaipa,
kana kuyerera kwako kuchipikiswa nema dikes,
Zvipe runyararo, asi usakanda mapfumo pasi!
«Nekuti mune ino hupenyu hapana chekupedzisira,
funga nezve izvo: zvese zvinopfuura, zvese zvinosvika uye zvese zvinodzoka ».
Mazuva ese, kunyangwe pasina nzeve dzinoteerera,
minamato yangu yakasimuka.
Mazuva ese, kunyange pasina moto wakaburuka,
Kunyange rima risina kubva kwandiri,
kunyangwe iye asina kutarisana nemauto mashoma,
Kunyangwe ivo vamwari vasina kupa chero chipo, kunyangwe zvese,
Pasinei nezvose, ini ndaishumira Vamwari.
Rufu kubva pakutanga rwakandifarira, ndichinyatsoziva kuti handikwanise kubata
mirira zuva rake zuva nezuva. Ndakasiya vakuru vangu ndokuuya
kuridza muridzo neminda, uye, mushure mekuita chokwadi,
"Mutsara wako wave kusvika kumagumo," akadaro, "asi ini ndatochengeta yake
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Rudyard Kipling. Makore zana nemakumi matatu nematatu ekuberekwa kwake. Nhetembo mbiri
Yangu 7 kuverenga kwe2018.Yakateedzana, shanduro uye rudo. Mutema anokunda.